नेपाल-प्रचण्डको श’क्ति प्र’दर्शन , मुश्किलले २ हजार कार्यकर्ता सडकमा ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारनेपाल-प्रचण्डको श’क्ति प्र’दर्शन , मुश्किलले २ हजार कार्यकर्ता सडकमा !
नेपाल-प्रचण्डको श’क्ति प्र’दर्शन , मुश्किलले २ हजार कार्यकर्ता सडकमा !
काठमान्डौ , नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले संसद वि’घटनवि’रुद्ध काठमाडौं श’क्ति प्र’दर्शन गरेको छ । आज राजधानीमा नि’कालिएको जु’लुसमा उक्त स’मूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अ’ग्रिम मो’र्चामा देखिएका थिए । राजधानीका विभिन्न स्थानबाट भृकुटीमण्डपमा जम्मा भएको जु’लुस प्रचण्ड- माधव नेपालको नेतृत्वमा सहिद गेट, पुतलीसडक, रत्नपार्क हुँदै पुनः भृकुटीमण्डपमा आएर वि’रोध सभामा परिणत भएकाे थियाे। उक्त प्र’दर्शनमा मुस्किलले दुइ हजार कार्यकर्ता उपस्थित रहेका थिए ।
प्रचण्ड नेपाल स’मुहले ५० हजार कार्यकर्ता सडकमा उ’तार्ने दा’बि गरेको थियो ।आज काठमाडौंमा नि’कालिएको जु’लुसमा सडक नै ल’ज्जित हुने ना’रा लगाइएको छ । प्रचण्ड स’मूहले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मा’ग गर्दै आज देशव्यापी प्र’दर्शन गरेको हो । त्यस क्रममा काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न ठाउँबाट जु’लुस नि’कालेर भृकुटीमण्डपमा आ’मसभा गरिएको हो । प्रचण्ड स’मूहको जु’लुसमा अ’श्लील ना’रा समेत लगाएका थिए । उनीहरुले ‘विद्या ते’रो सिन्दुर खोई ? केपीओली ते’रो…’ ना’रा लगाएका थिए ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मृ’त्युको कामना गरेर पनि ना’रा लगाइएको थियो । जु’लुसमा ठाउँठाउँमा ‘आ’र्यघा’टले के भन्छ ? केपी ओली ले भन्छ’ ना’रा लगाइएको थियो । त्यसैगरी ‘ओलीको ग’र्दन…., प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ब’नाइन्छ’ ना’रा पनि लगाइएको थियो ।जु’लुसमा ‘प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री न’बनाइ सडक छा’ड्दैनौं’ ना’रा लगाइएको थियो । त्यसैगरी ‘केपीओली माटो हो, प्रचण्ड नै देशको बाटो हो’ ना’रा लगाइएको थियो । जु’लुसमा ठाउँठाउँमा ‘प्रचण्डपथ जि’न्दावाद, महान ज’नयु’द्ध जि’न्दावाद’ ना’रा पनि लगाइएको थियो ।
यी कुनै पनि ना’रा प्रचण्ड स’मूहले आ’धिकारिक रुपमा तय गरेको थिएन । स’मूहले १४ वटा ना’रा तय गरेको थियो । मञ्च तथा मा’इकबाट भने आ’धिकारिक रुपमा तय गरिएका ना’रा मात्र लगाइएको थियो ।पूर्व एमाले भन्दा मा’ओवादीहरुले उ’ग्र र अ’श्लील ना’रा लगाएका थिए । काठमाडौं बा’हिरका प्र’दर्शनमा पनि अ’श्लील र अ’शोभनीय ना’रा लगाइएको छ ।